တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အားယနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာ၌ COVID-19 ရောဂါနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကာကှယျရေး၊ ထိနျးခြုပျရေး၊ ကုသရေးနှငျ့ အခွားလိုအပျခကျြမြားအတှကျ တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာ-ဂပြနျ နှဈနိုငျငံ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးနှငျ့ အခွားကဏ်ဍပေါငျးစုံတှငျ ဆကျဆံမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပငျလုံ စတုတ်ထအစညျးအဝေးကငျြးပပွုလုပျမညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြား ခြုပျငွိမျးပွီး ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ ဒီမိုကရစေီစနဈကငျြ့သုံးသညျ့ နိုငျငံတိုငျးတှငျ ရှေးကောကျပှဲသညျအရေးကွီးပွီး လှတျလပျ၍တရားမြှတမှုရှိရနျလိုအပျသညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရေးအတှကျ တဈနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးသဘောတူစာခြုပျ(NCA) ကိုအခွခေံပွီး ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ နိုငျငံရေး ဖွဈပျေါပွောငျးလဲမှုအခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အားယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေး၊ ကုသရေးနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာ-ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင်လုံ စတုတ္ထအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်မည့် အခြေအနေများနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံတိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲသည်အရေးကြီးပြီး လွတ်လပ်၍တရားမျှတမှုရှိရန်လိုအပ်သည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်(NCA) ကိုအခြေခံပြီး ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။